Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 19, 2019 00: 30 No Comments
Dad badan oo Afrikaan ah iyo madow oo dunida ku nool oo aan u hoggaansamin fikraddan dhaqan-dhaqameedka reer Galbeedka, halkan waa shan xafladood oo Afrikaan ah oo la mid ah Halloween oo noqon karta bedel wanaagsan oo macne leh.
iidda Egungun - Nigeria
Damaashaadka Egungun waa dabbaaldegga sannadlaha ah ee kooxaha Yoruba inta badan waxaa ku yaal koonfur galbeed Nigeria.
Damaashaadka Egungun wuxuu bilaabmaa sanad kasta Nofembar wuxuuna dhammaadaa Abriil, kahor roobabkii sanadlaha ahaa.
Dabbaaldegu waa dabbaaldegga nolosha shakhsiyaadka muhiimka ah ee bulshada oo ku dhintay sanadkan.
Egungun : waa erey Yoruba taas oo loola jeedo maskers kuwaas oo soo galaya waddada inta lagu guda jiro xafladaha, qoob ka ciyaarka hawada khabiirada khibrada leh.
Waxaa la rumeysan yahay in maskers waxaa doortay ilaahyo, kuwaas oo siinaya awoodo gaar ah oo ay kula xiriiraan kuwii dhintay iyo fadlan awoowe. Tani waxay ka dhigan tahay in qofna uusan dharka gashan karin mashiinka dhaqdhaqaaqa oo uu ku raaxaysto qoob-ka-cayaarka dhaqanka inta lagu jiro xilliga xafladaha Egungun.
Xisbigu wuxuu calaamad u yahay in uu qofku daacad u siiyo waxay wuu soo xusuusan doonaa iyaga iyo inay weli meel ku leeyihiin dalka kuwa nool. Damaashadu waxay noqon kartaa aragti si loo arko sida Egungun waxay ku labisan yihiin maskaxyo badan iyo masraxyo iyo dharka iyo qoob ka ciyaarka iyo heesaha dhaqanka Yoruba. "The Munaasabadda waxaa hogaaminaya wadaadka sare ee jihaadka ah. »
Munaasabada dharka isboortiga - Ghana
Damaashaadka Junkanoo wuxuu u dhashay Ghana, Galbeedka Afrika, gaar ahaan dadka dhexdooda Ahanta, fanti et Akan kuwaas oo u yeeraya dabbaaldegga khudbadaha. Ghana, waxaa lagu dabaaldegaa sanadguuradii dabbaaldegga sanadkan ee Christmas iyo Sannadka Cusub.
Damaashad sidoo kale laga heley Bahamas, oo dhaqan ahaan loo abaabulo Christmas iyo New Year, Bahamas Junkanoo Bandhiga maanta waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu mudan ee guga.
Isagoo wajahaya daaqa guud, Wasaaradda Dalxiiska ayaa go'aansatay inay soo bandhigto bilaha May iyo June.
Munaasabaddan, ciidamadu waxay gaari karaan dadka 1000 inay ku ururaan tirooyin badan. Muusikada, qoobcayaasha iyo farshaxanada kale waxay ku socdaan waddooyinka magaalada hoose ee Nassau subaxnimadii hore, sameynta jimicsi jimicsi iyo qoob-ka-cayaar.
Damaashaadka waxaa loo barbardhigay Halloween dhowaantan sababtoo ah isku midka ah ee quruxdeeda iyo dharka, laakiin waxyaabo badan oo dhaqameedku ma dhigi karaan sida Halloween-sida la filayo. Laga bilaabo 1709, xafladda waxaa lagu abaabulay Yooxanaa kenu (oo loo yaqaano Jarmal iyo Dutch sida Yooxanaa Cani iyo ingiriisida magaca Yooxanaa Conny) si ay u jabiyaan Dutch-ka oo gacanta ku haysay dalkaAhanta oo dadkiisuu u iibsaday inuu addoon u noqdo.
Kulankan, maskers waa kuwo aan dhib lahayn oo aan waligood weerarin, laakiin waxay keenaan qosol iyo dabaaldeg dadweynaha deegaanka. Maskooyinkooda qarsoodi ah waxaa loogu talagalay in ay matalaan kuwa isku jilicsan tartanka madow surto dheer. Bandhiga ayaa sidoo kale ka helay booskiisa Bahamas iyo qaybo ka mid ah Jamaica si la mid ah isla markaana waxaa loo calaamadeeyay iyada oo aan lahayn dhaqanka dadka reer galbeedka ah. Bahamas, waxaa loo yaqaanaa Jannaani Fudud, oo ah dhilleysi la yidhaahdo Yooxanaa kenu.
Wag / Gaadi Dooni Festival- Egypte
Bandhigu wuxuu soo WAG waa xaflad aad u gaboobay oo taariikhda dib u soo celineysa mudaharaadyada iyo Firfircoonida. Waxaa loo dabbaal-degayaa dhimashada Osiris, tan waa mid ka mid ah xafladaha ugu da'da weyn ee lagu xusay Masar iyo Afrika.
Wakhtiyada dhowaan, xafladda waxaa sidoo kale lagu dabaaldegaa sharaf loogu talagalay nafta kuwa dhintay, iyaga oo u oggolaanaya inay ka soo kabtaan bilow wanaagsan oo ay bilaabaan safar cusub oo noloshooda ah. Waxay u arkaan in ay tahay shirkad wanaagsan sababtoo ah waxaa hogaaminaya Osiris.
Damaashaadka, oo loo yaqaan 'The Dead of Dead', ayaa lagu dabaaldegaa magaca xilliga daadadka, taas oo inta badan ku dhacda inta u dhaxaysa Juun iyo Sebtembar, marka webiyadu ay daadadku soo gaadheen Niil. Dhawaan dhowaan, xafladda waxaa loogu talagalay 18 ama August 19 iyadoo loo marayo cilmi baaris iyo faham taariikhda hore ee Masaarida.
Inta lagu jiro iidada Madrid iibiso, dadku waxay sameeyaan doomaha waraaqaha ee lagu dhejiyo galbeedka Niilka waxayna tilmaamaan dhimashada Osiris. Marka lagu daro doomaha waraaqaha, waxaa jira khamri badan oo la cabbo oo la cuno.
Le famadihana waa caado in qaar ka mid ah tarjumo sida suuqyada si fudud, laakiin ma laha wax la qaban karo.
Safarrada ayaa laga yaabaa inay xiriir la sameeyaan Ma'nene, dhaqan ah oo lagu dhaqmo jasiiradda Indonesia Sulawesi, oo ka kooban barxad, nadiifin iyo dhar gogol.
Le famadihana waa caado ka duwan, dhaqanka gaarka ah ee adduunka. Waa maxay asalkeeda? Maxay tahay? Waa maxay hadafku? Jawaabo.
Soo galitaanka xabaashii qoyska, galitaanka jannada
Intii lagu guda jiray raadinta mideynta boqortooyooyinka Madagascar Andrianampoinimerina (1745-1810), ciidamo badan Merina waxay ku dhinteen dhinaca hore. Waayo, boqorka, waa wax laga xumaado in lagu xabaali karo guriga. Kadib wuxuu soo jeediyay in dadkiisa ay dhiseen qabuuro qoys, kadibna waxay amar ku bixiyeen dib u celinta jidhka si uu u geeriyoodo qoyskiisa. Dhamaan tani waa lagama maarmaan, sababtoo ah sida ay aaminsan yihiin, waa sida gala jannada.
Le famadihana wuxuu runtii noqday dhaqan caado u ah 1814, xiligii xukunka wiilkaAndrianampoinimerina, Radama I (1793-1828). Sidaas awgeed waxay bilowday Imerina, ka dibna kooxaha qowmiyadeed ee ka tirsan boqortooyada midaysan waxay sidoo kale aqbaleen. Nidaamka waxaa loo abaabulaa sanad kasta 3, 5 ama 7 iyo taariikhda ay u taagan tahay mpanandro oo ka mid ah qoyska abaabulay, shaman iyo dhaqtar dhaqameed. Had iyo jeer waxay dhacdaa xilliga cimilada (inta u dhaxaysa Juun iyo Sebtembar).
Qayb ka mid ah dadka reer Christian, si kastaba ha ahaatee, waxay ka tagtay dhaqankan, sababtoo ah ficil iyo duco ee lagu xalin jiray awoowayaasha. Qeybtan dhaqanka Malagasy iyo aqoonsiga waa in si kastaba ha ahaatee loo xafidayaa qaab ama qaab kale, xitaa haddii ay la micno tahay sameynta isbeddelo iyo caqiidooyin kacsanaan leh.
Odo iidda - Nigeria
In Afrika, waxaa guud ahaan la rumeeysan yahay in kuwii dhintay ay awood u leeyihiin in ay dib u dhistaan ​​oo ayan tagin ama la ilaawin, laakiin ay ku sii noolaadaan qaab nololeed yar.
Dabbaaldegga Igbo à Odo gudaha Nigeria waxay muujinaysaa caqiidooyinkaan Afrikaanka ah.
JN Ndukaku Amankulor, oo wax ka dhigta Jaamacadda Nigeria, ayaa si ballaaran ugu qoran fiidiyoowgii Nigerian oo ku saabsan soo celinta tirada dadka dhintay.
Waxaa ka mid ah Igbo laga bilaabo Waqooyiga, xafladahan la yaabka leh ee khaaska ah waxaa la qabtaa labadii sanaba mar. Sidoo kale dhaqamada Afrika badankood, Igbo aaminsan in "Dhimashadu ma tagaan mana iloobin" waxayna ka caawiyaan nolosha iyaga oo ka ilaalinaya jinniyadooda xun iyo qorsheynta mustaqbalka.
Kuwa dhintay waxay leeyihiin awooda dib u dhiska iyo door muhiim ah ka qaadashada nolol maalmeedka ee qabiilka:
Dadka dhintay waxay ku jiraan qoysaskooda, halkaas oo ay sii wataan noloshooda mar labaad.
In the Cyclical World Vision wadaagaan IgboNoloshu waxay noqotaa kuwa dhintay, kuwa dhintayna waxay noqdeen kuwo aan weli dhalan.
Odo waa erey loo isticmaalo sharaxaadda dhimashada soo laabatay kuwaas oo ku qarashgareey ilaa lix bilood iyada oo la noolaa inta lagu guda jiro xafladaha. Waxay u muuqdaan qaab sawirro ah rag iyo dumar oo ay ku ciyaaraan xubno ka tirsan bulshada dareenka dhimashada kuwaas oo aqoonsigooda la qariyo. ka Odo waxaa marka hore lagu salaamay dabaaldegyada kadibna waxay tagaan guryahooda gaboobay, oo u turjumaya madadaalo iyo hadiyado badan. Bixitaankoodu waa mid murugo leh oo bulshada ku dhex geliya dhacdo dhacdo fasax fasax ah ka hor intaysan soo laabanOdo.
Dabbaaldegga dheer waa dabbaaldega u baahan diyaargarowyo badan iyo allabaryo bulsheed. Dumarka ayaa si weyn ugu lug leh diyaarinta raashinka iyo bandhigyada sida xubno ka mid ah kooxda heesaha iyo dhagaystayaasha. Abuurista dharka iyo maskooyinka laga sameeyey dhirta, caleemaha, baalasha iyo baalasha, iyo sidoo kale horumarinta kooxaha muyuusikada iyo ciyaaraha oo dhan waxaa lagu qabtaa meel caan ah oo ka baxsan tuulada dhexe. , halkaasoo turjubaanoOdo degan oo gacan ka geysta tababbarayaasha cusub. Dhaqanka. Xubno ka tirsan qoysaska qabaa'ilka ah ee ku nool beelaha fog waxay isku xirnaan doonaan xididadooda iyagoo waqti dheer la qaadanaya qoysaskooda iyagoo ku raaxeysta matalooyinka muuqaalkaOdo.
Isbeddelka kuwa dhintay ayaa ku jira jilayaashaOdo waxay ku lug leedahay erayada jugalka iyo dhaqdhaqaaqyada waaweyn. Muuqaaladu badanaa waa weyn yihiin, sida bambo yaxaas ah iyo dhar gashan dad badan, maaskaro Ijele taas oo sarreeya dadweynaha waxaana la isticmaalaa oo keliya todobo sanno oo kasta, iyo maaskaro Onyekulufa, oo dhan laga sameeyey cawska. Tilmaamayaashu si sahlan ayaa lagu aqoonsan karaa asalkooda.
Sida adduunka ku nool, dadka dhintay waxaa loo habeeyay darajo sare iyadoo leh lix qaybaha: waayeelka, odo xaq u leedahay, odo dhallinyarada odo lab, odo dumar ah (noocyada da 'yarta iyo kuwa hore), odo ilmaha / dhallaanka odo ruux iyo xayawaan odo. Waayeelka oo cinwaankeedu yahay odo waxay ka tarjumaysaa da 'weyn, sharaf, ixtiraam iyo hanti, iyo isticmaalaan kabaha, taageerayaasha iyo burooyinka si ay u muujiyaan xaaladooda. Mid ka mid ah jilayaashaas, Okikpe, waa awoowe oo kor u kaca kow iyo toban mitir iyo waraaqaha wareegga waxqabadka ee hoos yimaadda sacabyada iyo shayada maroodiga maroodiga ah oo ay afuuftay iyaga oo cinwaankoodu yahay tuulada. Wuxuu kormeeraa qolka hurdiga ah wuxuuna fadhiyaa carshi meel uu ka qabanayo dhacdooyinka.
Taariikhdu lafteedu way soo celisaa, doqonimo sidoo kale: Martin Madidi Fayulu, waxay isla markiiba ku dhawaaqday inuu yahay madaxweynaha DRC ka dib markii ay ku dhawaaqday maxkamada dastuuriga ah Félix Tshisekedi inuu noqdo madaxweynaha… (VIDEO)
Sep29 08: 37